DAWN dia mpianatra-mihazakazaka interdisciplinary malalaka toeram-pitsaboana izay hanompo uninsured marary avy amin'ny vondrom-piarahamonina Aurora. Ny tanjona dia roa heny: mba hanome ny tsara indrindra ny fahasalamana azo atao ho an'ny mpiara-monina sahirana, ary manome fahafahana ho an'ny Oniversiten'i Colorado mpianatra mba hiara-miasa amin'ny ary hianatra avy amin'ny tsirairay raha fanompoana ny fiaraha-monina manodidina ny Anschutz Medical Campus. Ny toeram-pitsaboana dia noforonina ho toy ny mpiray barotra eo an-tsaha sy ny Kilonga Care Foundation Progress.The toeram-pitsaboana, dia hisokatra ny olon-dehibe mararin'ny uninsured monina ao Original Aurora ny Talata hariva avy 5:30 ny 9:00 PM. Mba hamaritana raha toa ianao ka afaka ny ho hita amin'ny toeram-pitsaboana ny DAWN, dia jereo ny éligibilité pejy.
Ny maraina no misy ao amin'ny toeram-pitsaboana 1445 Dayton St, Aurora, CO 80010. Dia jereo ny Toeram-pitsaboana sy ny toerana Hours Pejy ho an'ny antsipirihany sy ny lalana.
Ampitomboy interdisciplinary fanompoana pitsaboana fianarana eo amin'ny fitsaboana, levitra, fitondran-tena ara-pahasalamana, fitsaboana ara-batana, mpitsabo mpanampy, fitaizana ny be antitra, nify, sy ny fahasalamam-bahoaka ireo mpianatra teo am-piandohan'ny matihanina fiofanana.
Hampiharihary ireo mpianatra ho amin'ny zava-baovao, fomba fitsaboana an-trano-manao tontolo iainana miaraka amin'ny tanjona mba hanohana ny Kilonga mpiasa fikarakarana famatsiana hitsena ny acutely fiakaran'ny tinady eo amin'ny fiaraha-monina an-drenivohitra.
Foster mentorship eo amin'ny sampam-pianarana ambaratonga voalohany sy ny fikarakarana ny fahasalamana matihanina ireo mpianatra manoloana ny tanjona iray ihany.
Omeo ny sehatra ho an'ny mponina sy Anschutz Aurora ireo mpianatra mba hizara ny fiainany sy ny fiaraha-monina.
Miaraha miasa amin'ny fiaraha-monina sy ny fikambanana mpamatsy mba hanafaka ny olon-dehibe tena ilaina fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny Original Access Point Aurora mponina.
Join ny mpiara-miasa aminy manodidina ny Anschutz toeram-pianarana mba hahazoana ny tanjona lehibe voasoritra ao amin'ny UCH Community Health Mila Fanombanana 2013 fametrahana Plan.
Nataonay Famerenana sy hampiroborobo ny kolontsaina ny fiarovana eo amin'ny momba ny tenantsika mba hanome ny tsara indrindra ho an'ny marary fikarakarana.
"Araka izay azo atao ny marary, araka izay kely araka izay azo atao ny marary"
Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho ny Tsy handratra Project tranonkala ao amin'ny Oniversiten'i Colorado.
Ny Oniversiten'i Colorado Anschutz Medical Campus no misy ao am-pon'ny Colorado iray amin'ireo fanamby ara-toekarena indrindra sy ny faritra underserved. Fanisam-bahoaka vinavina manondro ny tahan'ny uninsured maherin'ny 45% amin'ny manodidina avy hatrany mifanakaiky amin'ny Anschutz Medical Campus. Talohan'ny 2013 dia nisy aotra fiarovana-harato fikarakarana ambaratonga voalohany ao amin'ny toeram-pitsaboana 80010 kaody positaly.
Ny University of Colorado 2013 Community Health Mila Fanombanana (CHNA) fa i Access Nikarakara, Fahasalamana ara-tsaina, ary Obesity toy manokana ilain'ny vondro-piarahamonina. Ny fanatanterahana CHNA Plan mikatsaka ny hamaha ireo zavatra ilaina amin'ny fanorenana fiaraha-monina fiaraha-miasa, fanatsarana ny fiaraha-monina fahaiza-, ary ny fampiroboroboana ny politikam-bahoaka izay Manatsara ny fahasalamana sy ny Wellness in Original Aurora. To ireo faran'ny, ny University dia nanao dingana, miara-miasa amin'ny MCPN in 2013 sy ny fiandohan'ny 2014, manohana ny Mpitsoa-ponenana Wellness Center sy Bridges Nikarakara Program. Ireo ezaka efa nanomboka hanatsarana ny fidirana amin'ny hikarakara ny mponina amin'ny Medicaid manokana fiantohana. Na izany aza, dia mbola misy maro ny maningana ny Affordable Act Care ny fe-potoana tsirairay sy ny olon-dehibe uninsured mbola manana olana mampino fidirana fikarakarana voalohany indrindra.
University of Colorado Fianarana ho Dokotera Ny valin'ny fandinihana natao milaza fa ny 50% ny fahatelo taona ireo mpianatra ho mpitsabo irery ihany no liana amin'ny fikarakarana na ambaratonga voalohany, underserved fanafody, na izy roa. Mpianatra fiaraha-miasa mandamina ny toeram-pitsaboana dia nanome antsika ny tena manan-danja hatsiaka-nanambara faritra liana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana, nampananana harena an-toerana sy amin'ny firenena manam-pahaizana amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana sy ny zava-baovao ny fidirana.
Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa Kilonga Care Fandrosoana Colorado.
It has been over 10 taona Javad Marshall-Fields sy ny Fitantanam-bola no Vivian Wolfe Nampalahelo novonoina rehefa nitondra fiara handeha amin'ny Street Dayton any Aurora Jona 20, 2005. Ny roa Colorado State University nahazo diplaoma no voafandrika ny mpanao heloka bevava miezaka mba tsy Javad tsy mijoro ho vavolombelona amin'ny fotoam-pitsarana ho avy namono olona (kitiho eto ny mamaky ny vaovao momba ny zava-nitranga).
On Sunday, March 1, 2015, ny Dayton Street Opportunity Center officially opened its doors with the goal of preventing tragedies like that which claimed the lives of Javad Marshall-Fields and Vivian Wolfe on the same street nearly 10 taona talohan'ny.
Nandritra ny fotoam-pitsarana noho ny Javad sy Vivian ny famonoana, dia nanambara fa ny nahavanon-doza efa latsaka avy amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, ireo taranaka faharoa na fahatelo ao amin'ny fianakaviana mba ho am-ponja, ary nanana tombontsoa voafetra ao amin'ny vondrom-piarahamonina tsirairay. Ny tanjona ny Dayton Opportunity Street Center dia ny hampihena ny anton-javatra toy izany, ary mamorona fahafahana bebe kokoa ho an'ny tanora, fianakaviana, ary ny zanaka ao Aurora izay mety raha tsy izany dia hiverina amin'ny fiainana ny heloka bevava.
Taorian'ny doza ny fahaverezana, ny reny ny Javad sy Vivian - Rhonda Fields sy Christine Wolfe - nivory tao Fields 'an-trano, ary niresaka momba ny nizara te ho niharam-boina fisoloana vava, rariny ara-tsosialy, sy ny fanabeazana ny fiaraha-monina laharam-pahamehana. Izy ireo no namorona ny Fields Wolfe Fahatsiarovana Fund mba hiantohana ny ankizy rehetra, avy amin'ny vanim-potoana ny zero ny ho 24 manana ara-drariny, azo antoka, salama, lohany manomboka amin'ny andalan-teny soa aman-tsara ny olon-dehibe. Fields no nanomboka namorona ny tsy soa Fields Foundation ary nihazakazaka mba hanompo ao amin'ny Colorado panjakana mpanao lalàna ho toy ny Solontenan'ny for House District 42.
In 2012, in, mba hanome fanampiana sy ny fahafahana ho an'ny Aurora ny ankizy sy ny tanora, ny Fields Foundation nanomboka handray andrim-panjakana sy ny fiaraha-monina mpiara-miombon'antoka mba hiatrehana ny vahoaka ny ara-tsosialy sy ny tontolo iainana antony mety hahatonga ny ankizy Aurora mba hitolona pianarana ka manao salama, fitondrantena mampidi-doza. This effort led to the creation of the Dayton Street Opportunity Center which officially opened on March 1, 2015.